Slagging ndiye paumbwe yakanyauswa, zvishoma fused kana apiwa Rakasimbisa deposits furnace pamadziro uye nemamwe hukawanika vachibatwa wakaisvonaka kupisa. Kwenguva yakati, zvaiva dhipoziti kuti gang kunogona kuumba pasi bhaira sepombi. The dhipoziti garo anogona kutanga nyaya yakanaka nedota inoramba kana kuti d ...
Gang akavaka-up pamusoro mvura-rusvingo uye Tubing pamusoro pulverized marasha (PC) airamba boilers kunokonzera zvinetso midziyo dzaishandisa. The gang siyana nokuda zvinhu zvinoverengeka uye dzinosiyana yemasoja kuti chikwata. Coal sezvamunoita, uchishandisa tembiricha, uye huni-to-mhepo reshiyo vari pakati variables kuti tinzwe aimbova ...